TRUMP oo markale weerar culus ku qaaday Ilhaan Cumar | Wardoon
Home Somali News TRUMP oo markale weerar culus ku qaaday Ilhaan Cumar
TRUMP oo markale weerar culus ku qaaday Ilhaan Cumar
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump oo goob fagaare ah kula hadlayey boqolaal ka mid ah taageerayaashiia ayaa weerar culus oo dhanka afka ah ku qaaday, Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha Congresska dalkaasi.
Trump ayaa inta uu waday hadal-jeedinta ku soo celceliyey magaca Ilhaan Cumar, illaa ay ku buuqaan tageerayaashiisa.
Sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday in Ilhaan oo ah gabar Soomaali ah aysan jecleyn Mareykanka, islamarkaana ay ka doorbideyso dalka Yemen, sida uu hadalka u dhigay.
”Ilhaan Cumar waxay jeceshahay Yemen, laakiin ma jecla dalkeena,” ayuu yiri madaxweyne Trump.
Madaxweynaha Mareykanka oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyey Ilhaan Cumar iyo musharrax la loolamaya Joe Biden inay doonayaan inay Mareyanka soo geliyeen qaxooti fara badan.
“In 700% la kordhiyo qaxootiga laga soo qaado meelaha ugu halista badan ee argagixisada meel kasta oo adduunka ah oo ay ku jiraan Syria, Somalia, waa siyaasadda Ilhaan Cumar iyo Biden,” ayuu yiri markale Madaxweynaha wadanka Mareykanka.
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyada oo dhowaan Ilhaan Cumar ay ku eedeysay Trump inuu qeyb ka yahay siyaasadda arrimaha dibadda ee fashilan, gaar ahaan tan dalka Yemen.
Previous articleDhul Gariir xoogan oo ku dhuftay Turkiga +SAWIRRO
Next articleSoomaalida iyo Cafarta oo dagaal ka dhex qarxay
Wasiirka amniga Uganda oo amray in latoogto dadka banaanbaxaya
Wax amar ah kama qaadanayno kuwa cadowga la shaqeynayay